ချစ်ကြည်အေး: တကယ်ပဲ ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင်....
ဘယ်အရာတွေက ခင်ဗျားတို့ကို ပျော်ရွှင်စေနိူင်သလဲ ?
သစ်ပင်တက်ရတာကို ပျော်တယ်။ ဘိုင်စကယ်စီးရတာကို ပျော်တယ်။ မိသားစုနဲ့အတူ မော်တော်ဘုတ်စီးရတာကို ပျော်ခဲ့တယ်။
အဖေက အဲ့တုန်းက ရယ်စရာတခု ပြောလေ့ရှိတယ်။
ယောကျာ်းတယောက်ရဲ့ဘဝမှာ အပျော်ဆုံးအချိန် ၂ကြိမ်ပဲရှိတယ်ကွ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မော်တော်ဘုတ် ဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်ရယ်၊ နောက်တကြိမ်က အဲဒီမော်တော်ဘုတ်ကို ပြန်ရောင်းပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ရယ်။
၆နှစ်သားကျွန်တော့်အတွက် အဲဒီဟာသကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ခုချိန်မှာတော့ သေချာတွေးကြည့်လေ၊ နက်နက်နဲနဲနားလည်လေပဲ။
ကလေးငယ်လေးတွေရဲ့ပုံကို တွေ့ရင် ပျော်မယ်။ စိတ်ချမ်းသာမယ်။
ခွေးကလေး၊ ကြောင်ကလေးတွေရဲ့ပုံကို တွေ့ရင် အူမြူးပျော်ရွှင်ရမယ်။
ဒါတောင် အွန်လိုင်းပေါ်ကပုံနော်၊ အပြင်မှာသာ ချီရပွေ့ရရင် ဘယ်လောက်တောင် ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မလဲ။
မျက်လုံးက အတွေ့ဟာ ဦးနှောက်လှိုင်းတွေကို ရိုက်ခတ်စေတယ်။ မျက်နှာဟာ ပြုံးလာတယ်။ ပျော်စရာဟော်မုန်းတွေ ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
အဲတာတွေက ခင်ဗျားတို့ကို ကျန်းမာစေတယ်။ ပျော်ရွှင်စေတယ်။ အလုပ်တွင်စေတယ်။
ခွေးကလေးက ဆိုဖာပေါ် ချေးပါချတဲ့အခါ
ကြောင်ကလေးက အိပ်ယာပေါ် သေးပန်းချတဲ့အခါ၊ အင်း...
ဒီတော့ ဘာက အရေးကြီးနေတာလဲ?
ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတဝက်လျော့နေတယ်နဲ့ ဖန်ခွက်ထဲမှာ ရေတဝက်အပြည့်ရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုး။
ကောင်းသောအမြင် ကောင်းသောအတွေး။ Positive thinking လို့ လူတွေ အပြောများကြတယ်။ ဒါ အရေးကြီးတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်မလဲHow ? ဆိုပြီး မေးစရာရှိလာတယ်။
သူကတော့ နည်းလမ်း ၃ခု ညွှန်းထားတယ်။ အဲတာကို Programing Happiness လို့ သူက ဆိုတယ်။
1. Guided mediation
ဒါကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။
ကျွန်မကတော့ မနက်အိပ်ရာထတာနဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက် တင်ပလ္လင်ခွေထိုင်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကို ပြန်တည်ကြည့်တယ်။ ခန္ဓာမှာ နာကျင်နေတာတွေ ကြည့်တယ်။ လက်ရှိမှာ နေကြည့်တယ်။
သူကတော့ ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ခဲ့သမျှတွေကိုအသံသွင်းပြီး နားကြပ်တပ်ကာ ပြန်နားထောင်လေ့ရှိတယ်။ ၆မိနစ်လောက်စာလောက်ပေါ့။ ဒီနည်းက စိတ်ကို ပျော်အောင်၊ တက်လာအောင် ဆွဲတင်စရာမလိုဘဲ အကောင်းဆုံး Boost လုပ်ဆောင်ပေးနိူင်တယ်လို့ဆိုတယ်။
2. Magic question
မနက်မနက် မှန်ထဲကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းတခုစီလောက် မေးကြည့်ပေးပါ။
ကျန်တဲ့တနေ့တာမှာ ဒါကို ပြန်ပြန်တွေးမိတိုင်း ပျော်စေမယ့်၊ အားအင်ရှိစေမယ့် မေးခွန်းမျိုးတော့ ဖြစ်ရပါမယ်။
ဒီနေ့ ဘယ်အရာက ငါ့ကို အံ့သြပျော်ရွှင်စေမလဲ၊ ငါ မစောင့်နိူင်တော့ဘူး။
အလုပ်နည်းနည်းလုပ်ပြီး၊ တနှစ်မှာ ခရီးလေးကြိမ်လောက် ထွက်နိူင်အောင် ငါ ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ?
ဒီနေ့ဟာ ဘယ်လောက်တောင် လှပတဲ့နေ့ဖြစ်မလဲ?
အဲသလိုမေးခွန်းတွေလို့ သူက ဥပမာပေးထားတယ်။
ကျွန်မကတော့ ကိုယ်ဆောက်တည်နိူင်မယ့် သီလတခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် ကတိတခုခု ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပေးလိုက်တာမျိုး လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ငါ ဒီနေ့ အရက်သေစာ မသောက်ဘူး။ လိမ်မပြောဘူး။ ငါ ဒီနေ့ စိတ်ညစ်စရာတွေ စိတ်ထဲ အဝင်မခံဘူးစသည်ဖြင့်။
ကိုယ့်ခန္ဓာရဲ့အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကို လှုပ်ရှားပေးနေဖို့။ ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းကလေးတွေ လှုပ်ရှားပေးနေတာမျိုး။ လက်ရေးလက်သားကအစ ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားတာမျိုး။ လက်မှတ်ပြောင်းထိုးကြည့်တာမျိုး။
ကျွန်မကတော့ ညာသန်ဖြစ်တာမို့ စာကို ဘယ်လက်နဲ့ ပြောင်းရေးကြည့်တယ်။ သွားတိုက်တဲ့အခါ ဘယ်လက်နဲ့ သွားတိုက်တံကိုင်ပြီး တိုက်ကြည့်တယ်။ အဲတာမျိုးပေါ့။
လုပ်နေကျအလေ့အထတွေကနေ ပြောင်းလဲကြည့်ပါ။ အရင်က မဖွံ့ဖြိုးတဲ့ ဦးနှောက်အစိတ်အပိုင်းတွေ စတင်လှုပ်ရှားလာမယ်၊ မီးငြိမ်းနေတဲ့ ဦးနှောက်ပတ်လမ်းကလေးတွေမှာ မီးတောက်ကလေး ဖျတ်ကနဲ ထတောက်မယ်။
Bart Baggettက အဲသလို အခိုင်အမာပြောထားပါတယ်။
Neuroplasticity အကြောင်း ကျွန်မ ရေးခဲ့ဖူးတယ်။ အချိန်တော့ ယူရလိမ့်မယ်။ ကြာတော့လည်း အလေ့အထတခုအဖြစ် မခဲယဉ်းတော့ဘဲ ယဉ်ပါးလာပါလိမ့်မယ်။
ချမ်းသာဖို့အတွက် မချမ်းသာတဲ့စိတ်တွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့ ကြိုးစားခြင်းဟာ ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လမ်းအစပါပဲ...👈
The Neuro-Pathway to Happiness | Bart Baggett | TEDxUBIWiltz ထဲက ကောက်နှုတ်ရေးသားထားပါတယ်။
ဘယျအရာတှကေ ခငျဗြားတို့ကို ပြျောရှငျစနေိူငျသလဲ ?
သဈပငျတကျရတာကို ပြျောတယျ။ ဘိုငျစကယျစီးရတာကို ပြျောတယျ။ မိသားစုနဲ့အတူ မျောတျောဘုတျစီးရတာကို ပြျောခဲ့တယျ။
အဖေက အဲ့တုနျးက ရယျစရာတခု ပွောလရှေိ့တယျ။
ယောကျြားတယောကျရဲ့ဘဝမှာ အပြျောဆုံးအခြိနျ ၂ကွိမျပဲရှိတယျကှ။ ပထမဦးဆုံးအကွိမျအဖွဈ မျောတျောဘုတျ ဝယျလိုကျတဲ့အခြိနျရယျ၊ နောကျတကွိမျက ပွနျရောငျးပဈလိုကျတဲ့အခြိနျရယျ
၆နှဈသားကြှနျတေျာ့အတှကျ အဲဒီဟာသကို နားမလညျခဲ့ဘူး။ ခုခြိနျမှာတော့ သခြောတှေးကွညျ့လေ၊ နကျနကျနဲနဲနားလညျလပေဲ။
ကလေးငယျလေးတှရေဲ့ပုံကို တှရေ့ငျ ပြျောမယျ။ စိတျခမျြးသာမယျ။
ခှေးကလေး၊ ကွောငျကလေးတှရေဲ့ပုံကို တှရေ့ငျ အူမွူးပြျောရှငျရမယျ။
ဒါတောငျ အှနျလိုငျးပျေါကပုံနျော၊ အပွငျမှာသာ ခြီရပှရေ့ရငျ ဘယျလောကျတောငျ ပြျောစရာကောငျးလိမျ့မလဲ။
မကျြလုံးက အတှဟေ့ာ ဦးနှောကျလှိုငျးတှကေို ရိုကျခတျစတေယျ။ မကျြနှာဟာ ပွုံးလာတယျ။ ပြျောစရာဟျောမုနျးတှေ ထုတျပေးလိုကျတယျ။
အဲတာတှကေ ခငျဗြားတို့ကို ကနျြးမာစတေယျ။ ပြျောရှငျစတေယျ။ အလုပျတှငျစတေယျ။
ခှေးကလေးက ဆိုဖာပျေါ ခြေးပါခတြဲ့အခါ
ကွောငျကလေးက အိပျယာပျေါ သေးပနျးခတြဲ့အခါ၊ အငျး...
ဒီတော့ ဘာက အရေးကွီးနတောလဲ?
ဖနျခှကျထဲမှာ ရတေဝကျလြော့နတေယျနဲ့ ဖနျခှကျထဲမှာ ရတေဝကျအပွညျ့ရှိနတေယျဆိုတာမြိုး။
ကောငျးသောအမွငျ ကောငျးသောအတှေး။ Positive thinking လို့ လူတှေ အပွောမြားကွတယျ။ ဒါ အရေးကွီးတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဘယျလိုလုပျမလဲHow ? ဆိုပွီး မေးစရာရှိလာတယျ။
သူကတော့ နညျးလမျး ၃ခု ညှနျးထားတယျ။ အဲတာကို Programing Happiness လို့ သူက ဆိုတယျ။
ဒါကို ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ ဘယျလို လုပျကွမလဲ။
ကြှနျမကတော့ မနကျအိပျရာထတာနဲ့ ဆယျမိနဈလောကျ တငျပလ်လငျခှထေိုငျပွီး ကိုယျ့စိတျကို ပွနျတညျကွညျ့တယျ။ ခန်ဓာမှာ နာကငျြနတောတှေ ကွညျ့တယျ။ လကျရှိမှာ နကွေညျ့တယျ။
သူကတော့ ပြျောရှငျအောငျမွငျခဲ့သမြှတှကေိုအသံသှငျးပွီး နားကွပျတပျကာ ပွနျနားထောငျလရှေိ့တယျ။ ၆မိနဈလောကျစာလောကျပေါ့။ ဒီနညျးက စိတျကို ပြျောအောငျ၊ တကျလာအောငျ ဆှဲတငျစရာမလိုဘဲ အကောငျးဆုံး Boost လုပျဆောငျပေးနိူငျတယျလို့ဆိုတယျ။
မနကျမနကျ မှနျထဲကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို မေးခှနျးတခုစီလောကျ မေးကွညျ့ပေးပါ။
ကနျြတဲ့တနတေ့ာမှာ ဒါကို ပွနျပွနျတှေးမိတိုငျး ပြျောစမေယျ့၊ အားအငျရှိစမေယျ့ မေးခှနျးမြိုးတော့ ဖွဈရပါမယျ။
ဒီနေ့ ဘယျအရာက ငါ့ကို အံ့သွပြျောရှငျစမေလဲ၊ ငါ မစောငျ့နိူငျတော့ဘူး။
အလုပျနညျးနညျးလုပျပွီး၊ တနှဈမှာ ခရီးလေးကွိမျလောကျ ထှကျနိူငျအောငျ ငါ ဘယျလိုကွိုးစားရမလဲ?
ဒီနဟေ့ာ ဘယျလောကျတောငျ လှပတဲ့နဖွေ့ဈမလဲ?
အဲသလိုမေးခှနျးတှလေို့ သူက ဥပမာပေးထားတယျ။
ကြှနျမကတော့ ကိုယျဆောကျတညျနိူငျမယျ့ သီလတခုခု၊ ဒါမှမဟုတျ ကတိတခုခု ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပေးလိုကျတာမြိုး လုပျလရှေိ့တယျ။ ငါ ဒီနေ့ အရကျသစော မသောကျဘူး။ လိမျမပွောဘူး။ ငါ ဒီနေ့ စိတျညဈစရာတှေ စိတျထဲ အဝငျမခံဘူးစသညျဖွငျ့။
ကိုယျ့ခန်ဓာရဲ့အစိတျအပိုငျးလေးတှကေို လှုပျရှားပေးနဖေို့။ ခွခြေောငျး၊ လကျခြောငျးကလေးတှေ လှုပျရှားပေးနတောမြိုး။ လကျရေးလကျသားကအစ ပွောငျးဖို့ ကွိုးစားတာမြိုး။ လကျမှတျပွောငျးထိုးကွညျ့တာမြိုး။
ကြှနျမကတော့ ညာသနျဖွဈတာမို့ စာကို ဘယျလကျနဲ့ ပွောငျးရေးကွညျ့တယျ။ သှားတိုကျတဲ့အခါ ဘယျလကျနဲ့ သှားတိုကျတံကိုငျပွီး တိုကျကွညျ့တယျ။ အဲတာမြိုးပေါ့။
လုပျနကေအြလအေ့ထတှကေနေ ပွောငျးလဲကွညျ့ပါ။ အရငျက မဖှံ့ဖွိုးတဲ့ ဦးနှောကျအစိတျအပိုငျးတှေ စတငျလှုပျရှားလာမယျ၊ မီးငွိမျးနတေဲ့ ဦးနှောကျပတျလမျးကလေးတှမှော မီးတောကျကလေး ဖျတ်ကနဲ ထတောကျမယျ။
Bart Baggettက အဲသလို အခိုငျအမာပွောထားပါတယျ။
Neuroplasticity အကွောငျး ကြှနျမ ရေးခဲ့ဖူးတယျ။ အခြိနျတော့ ယူရလိမျ့မယျ။ ကွာတော့လညျး အလအေ့ထတခုအဖွဈ မခဲယဉျးတော့ဘဲ ယဉျပါးလာပါလိမျ့မယျ။
ခမျြးသာဖို့အတှကျ မခမျြးသာတဲ့စိတျတှကေို ဖယျထုတျပဈလိုကျဖို့ ကွိုးစားခွငျးဟာ ခမျြးသာပြျောရှငျခွငျးရဲ့လမျးအစပါပဲ...
The Neuro-Pathway to Happiness | Bart Baggett | TEDxUBIWiltz ထဲက ကောကျနှုတျရေးသားထားပါတယျ။